विद्यालयको जग्गामा खेल मैदान निर्माण गर्नुको सट्टा सटर बनाएर भाडामा « News24 : Premium News Channel
विद्यालयको जग्गामा खेल मैदान निर्माण गर्नुको सट्टा सटर बनाएर भाडामा
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवसायतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । विद्यालयको जग्गामा खेल मैदान र विद्यार्थीका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुको सट्टा कतिपयले सटर बनाएर भाडामा लगाउन थालेका छन् । जसले विद्यालयलाई शैक्षिक भन्दा व्यवसायिक केन्द्र बनाउने खतरा बढाएको छ ।
यो काठमाडौंको विजय स्मारक विद्यालय, जसले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा ७ वटा सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ । पशुपति माध्यमिक विद्यालयले पनि २४ वटा सटर भाडामा दिएको छ । यस्तै, पद्यकन्या विद्याश्रमले एक दर्जज सटर व्यवासयिक प्रयोजनमा लगाएको छ । यि त केही उदाहरण मात्र हुन्, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले यसरी नै सटर बनाएर भाडा लिइरहेका छन् । प्रायःजसोले प्रति महिना एउटा सटर वापत १०/१५ हजार भाडा उठाउँछन् ।
विद्यालयको आन्तरिक स्रोतका लागि ठीकैजस्तो लागेपनि खेल मैदान नबनाएर, भएको पनि मासेर वा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ध्यान नदिएर सटर भाडामा लगाउने प्रबृत्तिलाई विद्यार्थी नै सकारात्मक मान्दैनन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले दिँदै आएको बजेट पर्याप्त नहुँदा बैकल्पिक स्रोत खोजी गर्नुपर्ने बाध्यताले सटर भाडामा लगाइएको अधिकांश स्कूलको भनाइ छ । सटर वापत प्राप्त हुने पैसा आफैंले नियुक्त गरेका शिक्षक र कर्मचारीको तलव, सामान्य मर्मत–संभार, सभा–समारोह, अतिरिक्त क्रियाकलाप र मसलन्दमा खर्च गरिन्छ ।
विद्यालयमा पर्याप्त खेल मैदान मात्र होइन वरपरको वातावरण शान्त र मर्यादित हुनुपर्छ । तर, भाडामा दिइएको सटरमा सञ्चालित पसल, होटल वा अन्य व्यवसायिक संस्थामा हुने बाक्लो आवत–जावत, हो–हल्ला वा कतिपयमा हुने आवान्छित गतिविधिको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा पर्छ । सीमित अर्थोपार्जनका लागि भन्दै बढ्दै गएको यो प्रबृत्ति बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय शैक्षिक केन्द्र कम व्यवसायीक संस्था धेरै बन्ने संभावना रहन्छ ।
काठमाडौं । अध्ययनका लागि जापान र अष्ट्रेलियाले जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि प्रवेशाज्ञा (भीसा) खुल्ने भएको
शिक्षामन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल आज स्वदेश फर्किनु भएको छ । युनेस्कोको
‘यूके युनिभर्सिटी फेयर’ आयोजना गर्दै एसआईयूके नेपाल
काठमाडौं । एसआईयूके नेपालले यूके युनिभर्सिटी फेयर–२०२१ आयोजना गर्ने भएको छ । एसआईयूके नेपालले मंसिर
एमाले महाधिवेशन : राति ११ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन, २ बजेबाट मतदान हुने
सरकारले गर्‍यो १० सचिवहरुको सरुवा, को कहाँ तानिए ?
एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा को-को निर्विरोध निर्वाचित भए ? (सूचीसहित)